Wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo dhexmaray Al-Shabaab iyo Ciidanka Milatariga Itoobiya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo dhexmaray Al-Shabaab iyo Ciidanka Milatariga Itoobiya
Wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo dhexmaray Al-Shabaab iyo Ciidanka Milatariga Itoobiya
G/Baay (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Baay, ayaa sheegaya, in maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ay dagaal xooggan ciidanka Militariga Itoobiya kula galeen waddada xiriirisa degmooyinka Qansandheere iyo Berdaale ee gobolkaasi.
Wararka ayaa sheegaya, in kolonyo ay la socdeen Ciidanka Militariga Itoobiya ay ku soo dhaceen waddo qaraxyo badan lagu aasay, sidoo kalana ay ku diyaarsanaayeen dagaalyahano fara badan oo kuwa Al Shabaab ah.
Al-Shabaab ayaa saacadihii dambe ee Jimcihii shalay weerar toos ah markii dambe la eegtay kolonyadii ay la socdeen Ciidanka Itoobiya ee qaybta ka ah Amisom, taasoo jahwareer xoogan gelisay Militarigii Itoobiya.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalka oo hubka waaweyn la isku adeegsaday ay qaarkood ku qasabtay in ay guryahooda kaga cararaan.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in dagaalka uu soo gebagaboobay markii ay dib u garteen maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab, iyadoo khasaaro buurana uu dagaalka ka soo gaaray Ciidanka Itoobiya.
Ururka Al Shabaab ayaa dhankooda waxaa ay sheegteen in dagaalka ay ku dileen tobanaan ka mid ah Ciidanka Amisom, tiro kalana ay ku dhaawaceen, ha yeeshee Amisom weli dhankeeda kama aanay hadlin.
Si kastaba, waa dagaalkii ugu xooganaa ee sanadkan 2020-ka oo labada dhinac ku dhex mara Gobollada Koonfurta Soomaaliya.